Akụkọ - “Na-ejegharị na Xiandu na ịchụ àjà Xuanyuan”, Ọtụtụ puku ndị ọrụ nke Jinbang Holdings mezuru nrọ ha nke “ife ndị nna ochie”
N’ọnwa Nọvemba, Jinyun nwere ihu igwe dị mma, ikuku na igwe ojii na-enye obi ụtọ. N'ụtụtụ nke 21st, Golden Stick Holdings Co., Ltd. gbanwere "njem na Xiandu City na àjà Xuanyuan". Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku ndị ọrụ gbakọtara n'ọnụ ụzọ Greenway nke Jinyun Binjiang Park wee jee ije n'ụlọ nsọ Huangdi na Xuanyuan Huangdi Sacramential Center dị na ndịda China na atụmanya zuru oke.
Ejiri Jinyun Greenway dị ka "Greenway Kachasị Mma" na "Ten Green Green Road" na Zhejiang Province. Ọ dị ihe dịka kilomita iri na otu site na Jinyun Riverside Park ruo ebe mara mma nke ugwu Zhutan na Xiandu. Nkume di nwunye, nwanne nna Jiao rock, Xiaochi Cliff, Dinghu Peak, Ugwu Zhutan ... N'elu ala, ebe ndi mara mma na ndagwurugwu idyllic tinyere uzo ahihia ahihia, ndi mmadu ga-achota ima nma nke uwa mgbe ha na-acho gburugburu.
Ndị ọrụ Jinbang Sports, Jin Gutian Technology, Puqi Digital, Red Black Technology, Jinquan Technology, Megani Precision Equipment, Dolby Puqi na alaka ndị ọzọ nke Golden Stick Holdings nọ na mmụọ dị mma, ha na-azọkwa n'okporo ụzọ ndụ akwụkwọ ndụ nke ọma, na kwụ n'ahịrị gbasara ihe karịrị mita 200. , Ghọtara "ebe kachasị mma" n'okporo ụzọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke ụbọchị. Ọtụtụ ndị ọrụ kwuru, sị: "Ọnọdụ Jinyun mara mma nke ukwuu, anyị nwere ike ịrụ ọrụ na ndụ. Anyị ga-agbasi mbọ ike ebe a iji ghọta uru anyị bara na ndụ".
Na elekere iri na ise nke ehihie, igwe ojii meghere na ọwụwa, ìhè anyanwụ nke ọlaedo gosipụtara na Dinghu Peak na Xuanyuan Hall, ememe nsọ na nsọpụrụ nke nna nna ochie nke Jinbang Holdings Co., Ltd. malitere. Ọtụtụ puku ndị ọrụ kwụụrụ na mbara ihu n'ihu ụlọ nsọ ahụ iji fee ofufe nke mba China. Nna nna ochie Xuanyuan Huangdi na-echeta uru nke nna ochie ahụ ma na-akpali mmụọ mmepe nke ụlọ ọrụ ọlaedo ọlaedo.
Emere ofufe nna nna ochie site na mkpọ na mgbịrịgba. Ogba otiti 34 na-anọchite anya mpaghara, obodo, mpaghara kwụ ọtọ, na mpaghara nchịkwa pụrụ iche, mgbịrịgba mgbịrịgba iri na ise na-anọchite anya ijeri ụmụ China na China gburugburu ụwa. Onye isi nchụaja, Jinbang Holdings, ndị otu ụlọ ọrụ na ndị nnọchi anya alaka dị iche iche jiri nkwanye ugwu dị elu, nkata ifuru, na àjà anụmanụ atọ sọpụrụ Xuanyuan Huangdi.
Mgbe Xu Yongqiang, onye isi oche nke Golden Stick Holdings Co., Ltd. nyefere mmanya na Xuanyuan Huangdi Statue, onye nnọchi anya nke Golden Stick Holdings gụrụ ederede ịchụ aja, ndị niile sonyere kpọọ isi ala nye Xuanyuan Huangdi Statue ugboro atọ. Emere emume ahụ nke ọma na egwu na egwu dị egwu.
Abara ọbara site n’ọgbọ ruo n’ọgbọ. Xuanyuan Huangdi bụ nna nna mmadụ nke mba China, nnukwu onye ọsụ ụzọ na onye guzobere mmepeanya China, yana njikọ ime mmụọ nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị China nọ n'ụlọ na mba ofesi. Ijide nke ọma n'ememe ofufe nna nna nke Golden Stick Holdings mezuru nrọ nke ndị ọrụ niile isonye na-efe nna nna ochie Xuanyuan Huangdi.